जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली भारत भ्रमण निस्कियो ! « News24 : Premium News Channel
जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली भारत भ्रमण निस्कियो !
संघीयता अवलोकन तथा अध्ययन गर्नका लागि गुठिचौर गाउँपालिकाको २७ सदस्यीय जम्बो टोली भारत भ्रमणमा निस्किएकाे छ । सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्दै तत्कालिन आवश्यकता विपरित गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारी कर्मचारीसहितको जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा निस्किएको हो ।
गाउँपालिकाको साढे ११ लाख रुपैयाँ लिएर जम्बो टोली संघीयता अवलोकन तथा अध्ययन गर्न भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ्ग हिँडेको हो । भ्रमणका लागि नेपालको लुम्बिनी, इलाम, काठमाडौँ हुँदै भारतको सिक्किम र दार्जिलिङसम्मको यात्रा रहेको गाँउपालिका स्रोतले बताएको छ ।
सरकारी कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली १० दिने भ्रमणमा हिँडेपछि गाँउपालिकाको दैनिक महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहको कार्य रोकिएको स्थानीयले बताए । १० दिने संघीयता अवलोकन अध्ययन भ्रमण कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास भएको भ्रमण टोलीका सदस्य तथा ४ नं. वडाध्यक्ष जंगप्रसाद जैशीले बताए । भ्रमण टोली सिक्किम र दार्जिलिङमा मात्र करीब एकहप्ता घुम्ने छ ।गाउँपालिकाको सबै विकासे काम ठप्प पार्दै जम्बो टोली भ्रमणमा जानु उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन् ।
आफ्नो गाउँठाउँको आधारभुत विकासका लागि जम्बो टोलीको भ्रमण आवश्यक नरहेकाले भ्रमणले गाउँपालिकाको विकासे रकम दुरुपयोग भएको स्थानीय रामप्रसाद पाण्डेले बताए । संघीयता भ्रमण अध्ययनका नाममा गाउँपलिकाका जिम्मेवार पदमा रहेका सबै प्रमुखहरू स्थानीय तहको रकम लिएर घुम्न गएका हुन् । नयाँ पत्रिकाबाट
यता, भ्रमण टोलीका नेतृत्वकर्ता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले सिक्कीम र दार्जिलिङको विकास निर्माणका कार्यहरु हेरेर त्यहाँ भएका राम्रो कामलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा कार्यान्वयन गर्ने तर्क गरे । भ्रमण टोलीमा अध्यक्ष भण्डारी, उपाअध्यक्ष जानदेवि ऐडी, कार्यकारी प्रमुख केशवराज शर्मा, गाँउपालिकाका ५ वटा वडाका वडाध्यक्ष, वडा सचिव र प्रत्येक वडाबाट २ जना निर्वाचित वडासदस्यलगायतको टोली रहेको छ । यसैबिच केहीदिन अघि मात्र कनकासुन्दरी गाँउपालिकाको जम्बो टोली पनि ८ लाख रकम खर्च गर्दै भारत भ्रमण गरेर फर्किएको छ ।